I-Electronics Schematics: Iimpawu eziqhelekileyo ezisetyenziswayo kunye neelebheli
Iisekethe ezilula ze-elektroniki zinokuba nezinto ezincinci kumacandelo amabini. Uninzi lweesekethe zombane ziya kuba nezinto ezongezelelweyo. Kukho amakhulu eentlobo ezahlukeneyo zamacandelo e-elektroniki, kwaye nganye inesimboli yayo yomzobo owahlukileyo. Ngethamsanqa, kuya kufuneka wazi iisimboli ezimbalwa kunye neelebheli ukuze uqalise.
i-dimetapp iyabanda kunye ne-allergies
Qaphela ukuba xa isetyenziswe kumzobo wesekethe wangempela, iisimboli zihlala zijikeleza.
Umzobo oqhelekileyo weskimu.
Isimboli sisodwa asihlali sinolwazi olwaneleyo lokuchonga ngokupheleleyo icandelo le-elektroniki kwisazobe sesikimu. Ulwazi oluthe kratya luhlala lubandakanywa nesicatshulwa esibekwe ecaleni kophawu. Olu lwazi longezelelweyo luhlala lubandakanya oku kulandelayo:
Isazisi sesalathiso: Icandelo ngalinye lidla ngokubhalwa ngonobumba ochaza uhlobo lwecandelo elilandelwa linani elinceda ukufumanisa icandelo ngalinye lohlobo olufanayo. Umzekelo, ukuba isekethe inezinto ezine ezichasayo, ii-resistors zichongiwe njenge-R1, R2, R3, kunye ne-R4.
I-LED Ikhowudi ekhupha ukukhanya
NDIYABONA Isiphaluka esihlanganisiweyo
Ixabiso okanye inombolo yenxalenye: Kwizinto ezinje ngee-resistors kunye ne-capacitors, ixabiso linikwa kwi-ohms (ye-resistors) kunye ne-microfarads (ye-capacitors). Ke, isixhobo sokumelana ne-470 would siya kuba nenombolo eyi-470 ecaleni kwayo, kwaye i-100 μF capacitor iya kuba nenombolo eyi-100 ecaleni kwayo.
Ungenelelo lwe-nonpharmacologic lwentlungu
Oonobumba u-K no-M basetyenziselwa ukubonisa amawaka kunye nezigidi. Umzekelo, i-10,000 Ω yesixhathisi ichongiwe njenge-10K kwisikimu.
Izinto ezinje nge diode, iitransistors, kunye neesekethe ezihlanganisiweyo azinaxabiso; endaweni yoko, banamanani eenxalenye zomenzi. Ke, unokufumana inombolo yenxalenye enje nge-1N4001 (yediode), 2N2222 (yetransistor), okanye 555 (yesekethe edityanisiweyo, IC) ecaleni kwelinye lala macandelo.
Umzobo wesikimu onamacandelo anelebhile.
Ngamanye amaxesha, ixabiso okanye inani lenxalenye lishiyiwe kumzobo wesikim ngokwawo kwaye endaweni yoko ubandakanyiwe okwahlukileyo uluhlu lweenxalenye echonga ixabiso okanye inombolo yenxalenye yendawo nganye ekubhekiswa kuyo ebonakala kwiskimu. Emva koko, ukufumana ixabiso okanye inani lecandelo elithile, ujonga icandelo ngokubhekisa kwisazisi sesalathiso kuluhlu lwamalungu.
Olunye uphawu olubalulekileyo olungaboniswanga luphawu lwe-IC (isekethe edityanisiweyo). Ii-ICs ziindibano ezincinci zihlala zikhokela ezininzi, zibizwa izikhonkwane , Ezidibanisa kwiindawo ezahlukeneyo zesekethe eziqulathwe kwindibano. Ezinye ii-IC zinezikhonkwane ezimbalwa njengezintandathu okanye ezisibhozo; ezinye zinamakhulu okanye zinamakhulu. Ezi zikhonkwane zibaliwe, ukuqala ngepini 1.
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokubonisa isekethe edibeneyo kumzobo wesikim njengoluxande olulula kunye nezikhokelo eziphuma kuwo ukubonisa izikhonkwane ezahlukeneyo. Ulungelelwaniso lwezikhonkwane kumzobo wesikimu aluhambelani nolungelelwaniso lomzimba lwezikhonkwane kwi-IC uqobo.
Isulfameth tmp 800 160 mg ithebhu
Endaweni yokuba izikhonkwane zibekiwe ukubonelela ngeendlela zeesekethe ezilula kumzobo. Izikhonkwane ezikulo mzobo zibaliwe ukubonisa ipini efanelekileyo ukuyisebenzisa.
I-IC edumileyo ebizwa ngokuba yi-555 timer IC isetyenziselwa ukwenza ukukhanya kwe-LED. I-555 inezikhonkwane ezisibhozo, kunye neendlela zonxibelelwano zonxibelelwano zonxibelelwano ezisibhozo. Nangona kunjalo, izikhonkwane ezikulo mzobo zilungiswe ngohlobo olwenza lula unxibelelwano olwenziwe kwizikhonkwane.
Kwi-IC eyi-555, izikhonkwane zicwangciswe ngokulandelelana kwamanani kwicala le-IC, kunye nezikhonkwane 1 ukuya ku-4 kwicala elinye nezikhonkwane ezi-5 ukuya kwezi-8 kwelinye icala.
Isekethe esebenzisa isekethe emanyanisiweyo.
Indlela yokwenza zyrtec
Ngaba i-elavil ibangela ukutyeba
ingaba utywala buchaphazela ipilisi yolawulo lokuzalwa
naproxen idosi yegawuthi
Loperamide ihlala ixesha elingakanani
indlela yokuphepha ukuqhatha kwi-craigslist